Ngwa 5 kachasị mma iji gụọ calorie na gam akporo | Gam akporosis
Otu n'ime ngwaọrụ kachasị mma iji na-egosipụta ma na-enyocha ọrụ, ahụike na egwuregwu bụ, n'enweghị obi abụọ, ekwentị. Nke a bụ ekele maka ngwa ahụ ike niile gam akporo nwere na Playlọ Ahịa Google, ụlọ ahịa nke jupụtara n'oké osimiri nke ngwa site na ụdị ahụ ma na-enye anyị ọnụọgụ na-atọ ụtọ dịka ọnụọgụ calorie na-eri nri na n'oge ime egwuregwu, mmega ahụ na omume, na ndị ọzọ.
Na nchịkọta mkpokọta a anyị depụtara 5 kacha mma calorie na-agụta ngwa ndị dị taa na Storelọ Ahịa Play maka gam akporo. Ha niile nweere onwe ha ma n'otu oge ahụ ha nwere ọtụtụ nbudata, echiche, nkọwa na ọkwa na-egosi ha dị ka ndị kachasị mma n'ụlọ ahịa na ụdị ha.
N'okpuru ị ga-ahụ usoro nke Ngwa 5 kachasị mma iji gụọ calorie maka igwegharị gam akporo. Ọ dị mma ịkọba, dị ka anyị na-eme mgbe niile, na ndị niile ị ga-ahụ na nchịkọta mkpokọta a bụ n'efu ibudata. Ya mere, ị gaghị akpa ụdị ego ọ bụla iji nweta otu ma ọ bụ ha niile. Agbanyeghị, otu ma ọ bụ karịa nwere ike ịnwe sistemụ nkwụnye ego dị n’ime, nke ga-enye ohere ịnweta ọtụtụ ọdịnaya n’ime ha, yana atụmatụ adịchaghị elu na nke dị elu. N'otu aka ahụ, ọ dịghị mkpa ịkwụ ụgwọ ọ bụla, ọ bara uru ịmeghachi. Ugbu a ee, ka anyị gakwuru ya.
1 Kalori counter
2 Tụfuo Ya! - Calories counter
3 YAZIO: Calorie Counter maka Ibu Loss na Nri
4 Kalori counter
5 HiKi kalori mgbako
Calorie Counter bụ ngwa na-agaghị agụta aha ya. Isi ọrụ nke a bụ, n'eziokwu, iji nye ngụkọta nke calorie na-eri n'oge ọrụ ụbọchị. Ọ bụ ezigbo ngwa ọrụ iji nweta nsonaazụ ahụike n'oge dị mkpirikpi, ebe ọ na-egosi gị oke mbọ ị gbara, nke dị mkpa iji zere imebiga ihe ókè.
Ọzọkwa, o nwere ebe nchekwa ihe oriri sara mbara nke ukwuu. Na nke a ị ga-enweta ihe karịrị nri na nri 6 nde, ha niile nwere ụkpụrụ nri ha dị ka Abụba, Ndi na-edozi na kalori nwere ike ịnye gị ma ọ bụrụ na ị rie ha, dabere na data data, ee.
N'otu ụzọ ahụ, ọ bụ ụzọ magburu onwe ya iji tụọ ihe ị na-eri na nri ọ bụla, iji jiri ya belata ma ọ bụ buru ibu, ọ bụrụ na nke ahụ bụ ebumnuche gị na ebumnuche gị. Bụlagodi, ndị ọrụ na-ejikarị kalori kalori a belata abụba ahụ, n'ụkpụrụ. Nwere ike tinye ihe oriri ị ga-eri maka nri ụtụtụ, nri ehihie na nri abalị; n'aka, ị nwere ike ịzọpụta ọkacha mmasị gị na ngwa.
Ngwa a dị ọtụtụ ebe ọ nwekwara ibe weebụ, nke ị nwere ike ịmekọrịta ya n'ụzọ dị mfe, iji zere ịlafu data gị ma ọ bụrụ na ekwentị gị na-enwe ihe ọghọm ma ọ bụ izu ohi site na nkwado nhọrọ ị nwere ike ịme. E wezụga nke ahụ, iji gbaa ndị enyi ndị ọzọ ume ịgbaso nri dabere na calorie na-eri, ịnwere ike ịgbakwunye ha na ngwa ahụ ịgbaso na ịkekọrịta; Nri ha!
Calorie Counter na-esikwa ụdị nri ndị ọzọ dị mkpa dị ka carbohydrates, sugars, fiber, cholesterol na ndị ọzọ. Ọ na-abịa yana onye na-agụ barcode nke na-enye ohere ịchọpụta ihe oriri ndị dị na nchekwa data; dị nnọọ i scanomi zụrụ nri na ọ ga-egosi na ngwa na gị niile data. N’aka nke ya, enwere ihe mgbako na-emeputa ihe ma gbakọọ ihe na-edozi ahụ na usoro nri yana caloric na ọdịnaya na-edozi ahụ.
N'aka nke ọzọ, O nwere ihe kariri mmega 350, o nwere ike chekwaa data nke aru gi dika ibu na mmesho, na ndi ozo. Ngwa a bụ otu n'ime ihe kachasị mma na ụdị ya, ọ bụghị n'efu ka o nyeere ọtụtụ puku ndị ọrụ gburugburu ụwa aka ida karịa kilogram 90.
MyFitnessPal: Ezi ntụziaka kwa ụbọchị
Tụfuo Ya! - Calories counter
Ngwa ọzọ dị egwu maka ịgụta calorie, ịnwụ nri, na ibelata ibu ahụ bụ Lose It! - Calorie counter, ngwa nke nwere ihe karịrị 10 nde nbudata, akara ngosi 4.6 na Storelọ Ahịa Play na ihe karịrị 110 puku nkwupụta ziri ezi na ụlọ ahịa gam akporo.
Nweta oke ogo gị dịtụbeghị mfe. Jiri Ha! Younwere ike idekọ data ahụ gị dị ka nha, ibu na ndị ọzọ, iji guzobe ebumnuche na ebumnuche ị nwere ike izute na obere na ọkara ma ọ bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ, ogologo oge. Emechaa ị nwere ike ịchekwaa ịdị arọ gị, ọrụ na kalori.
Ngwa a na-eji calorie agụta nwere atụmatụ na ọrụ nke gụnyere nyocha barcode iji dekọọ nri ị ga-eri ma gosipụta ụkpụrụ caloric na nri ha (nke dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme otu nri iji belata ma ọ bụ bulie gị ibu). Ebe nchekwa data nri nke ngwa a nwere katalọgụ nke ihe karịrị nde iri abụọ na asaa ndị a sitere na gburugburu ụwa, ya mere o siri ike na ị nwetaghị nke ọ bụla, ma pere mpe ma ọ bụrụ na ọ bụkarị ya dịka mkpụrụ osisi, dịka ọmụmaatụ.
Ihe ọzọ dị na ngwa a bụ interface ya, nke dị mfe ma dịkwa mfe nghọta. Ọ nwere otu ngalaba ahaziri ahazi na ngalaba nke na-akọwa ọganihu gị niile, ọganiihu na ozi gbasara nri na nha gị.
Tụfuo ya! Calories counter
YAZIO: Calorie Counter maka Ibu Loss na Nri
YAZIO pụtara dị ka ngwa ọzọ magburu onwe ya iji gụọ calorie na nchịkọta mkpokọta a, ọ bụ ya mere anyị ji nye ya ọnọdụ ya kwesịrị oge a, n'ihi na ọ bụ ngwa ọrụ ahụike nke ị nwere ike iji nyochaa usoro calorie niile ị nwere kwa ụbọchị. Ọ na-enyekwa nsuso ngwa ngwa, yana ihe karịrị iri abụọ efere.
Ọzọkwa, YAZIO nwekwara ike ịchọpụta ihe omume ị na-eme kwa ụbọchị dịka ịga ije, ịgba ọsọ na ndị ọzọ, na-eme ka ị mara n'oge niile calorie ole ị na-ere ọkụ. Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, ọ na - enye ọtụtụ ụzọ iji belata ibu, mana ọ bụghị naanị maka nke a, kamakwa iji bulie ibu, ọ bụrụ na ọ bụ ihe ị na - achọ. O nwekwara katalọgụ nke usoro nri na nri na nri siri ike nke ga - enyere gị aka iru ebumnuche ahụ ịchọrọ.
YAZIO na-esokwa ọrụ maka ibu ọnụ. N'echiche a, ọ nwere oge oge, ihe ncheta, ịdọ aka na ntị na ịdọ aka ná ntị, na-enye nkọwa zuru ezu banyere usoro ahụ n'oge ị na-ebu ọnụ, na-akwalite autophagy na ketosis ma na-enye nyocha zuru oke banyere ibu ọnụ. Na mgbakwunye, ọ na-abịa karịa 1000 ntụziaka maka nri niile nke ụbọchị, yana onye nhazi nri, ọrụ, ndụmọdụ na aghụghọ kwa ụbọchị, n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
YAZIO akwụkwọ ndekọ ọnụ ọnụ na nri
Ngwa a, n’agbanyeghi na o nwere aha dika nke mbu, nwere oru di iche iche, n’agbanyeghi na ha nwere otu ebumnuche, ya mere Ọ dị mma maka ịnwụ na ibelata abụba na ahụ. Site na ngwa ọrụ a ị ga - enwe ike ịnwe atụmatụ nri nke onwe, nke dabere n'ọtụtụ ajụjụ ị ga - aza, ọ ga - enyere gị aka n'ihe mgbaru ọsọ gị. Ngwa a na-ejikwa calorie, protein na abụba ndị ị na-eri.
Site na tebụl calorie, ọ bụghị naanị na ị ga - enwe ike ijikwa njikwa ihe niile ị na - eri na uru ọ ga - enye gị. I nwekwara ike jigide ibu ị chọrọ - ọ bụrụ na ịchọghị ibelata ma ọ bụ mụbaa ya-ma nweta oke ahụ. Na mgbakwunye, ọ na-enye gị nri dị iche iche, dịka mkpa gị: ụfọdụ dabere na carbohydrates, ndị ọzọ na protein, na ihe ndị ọzọ ...
Ọ bụ ihe dị mfe na mfe iji calorie agụta ngwa maka gam akporo.
HiKi kalori mgbako
Iji mechaa nchịkọta mkpokọta nke calorie kacha mma na-agụta ngwa maka gam akporo smartphones, anyị nwere HiKi Calorie Calculator, ngwa ga-enyere anyị aka ifelata, ọbụlagodi ndị anyị nwere nsogbu na ya, ebe ụfọdụ ndị na - eme ka o sie ike karịa ndị ọzọ .
Ngwa a, dịka anyị nwere ike isi na aha ahụ, O nwere igwe oku nke calorie riri nke na-enye anyị ohere ijikwa nri anyị na ihe niile anyị na-eri n’ụbọchị, na-enyekwa anyị ozi dị mkpa gbasara GWP, pasent nke abụba ahụ ma e jiri ya tụnyere ịdị arọ ahụ. Ewu ewu na ngwa a na-egosi otu esi arụ ọrụ iji nweta oke na ibu ahụ; Anyị na-ekwu maka otu akara magburu onwe ya dị elu nke kpakpando 4.8 na Storelọ Ahịa Play.
Isi njirimara na ọrụ nke ngwa a bụ ihe ndị a:
Ọnwụ ọnwụ na usoro nri na-edozi ahụ
Bulite nri ahụ na saịtị ahụ wee nweta njikọ ya
Accounting maka oriri calorie n'ọtụtụ ihe na egwuregwu dị ka ịgba ọsọ na ije
Ngbanwe mgbanwe mgbanwe maka calorie, protein, abụba na carbohydrates
Nri calorie na nri dị njikere, nnukwu ngwaahịa
Na-arụ ọrụ na-enweghị ịntanetị, a na-echekwa data na ngwaọrụ
Agụta nkeji nke achịcha na-arịa ọrịa mamịrị nri
Ngụkọta oge nke nchịkọta anụ ahụ, pasent abụba, ụkpụrụ kalori na PGC
Nchịkọta nri glycemic na ibu glycemic
Nhọrọ nke ihe omuma banyere nri na aru ike
Ntọala akụkụ akụkụ maka ngwaahịa dị iche iche
Mita mmiri kwa ụbọchị
Nzukọ ịjụ ajụjụ
Ngakọrịta na ngwaọrụ ndị ọzọ
Developer: HiKi nro
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa 5 kachasị mma iji gụọ calorie na gam akporo